စကားဝိုငျးဆှေးနှေးပှဲ(ဒေးဒရဲမွို့နယျ) 25.2.2020 – Than Lwin
သံလှငျ(Citizen Empowerment Program) အဖှဲ့မှစီစဉျသညျ့ ရပျကှကျကြေးရှာအုပျခြုပျရေးအပျေါပွညျသူတို့၏သဘောထားအမွငျ စကားဝိုငျးဆှေးနှေးပှဲကို ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ ဖြာပုံခရိုငျ၊ ဒေးဒရဲမွို့နယျ (၂၅ . ၂. ၂၀၂၀) ရကျနမေ့နကျပိုငျးတှငျ ဥတိုကြေးရှာ၊ ကြုံဒူးဒါးမလိမျးကြေးရှာနှငျ့ ဂှကလေးကြေးရှာတို့ရှိ ပွညျသူမြားဖွငျ့လညျးကောငျး၊
နလေ့ယျပိုငျးတှငျ မွို့ပျေါ အမှတျ(၁)ရပျကှကျ၊ အမှတျ(၂)ရပျကှကျနှငျ့ အမှတျ(၃) ရပျကှကျတို့အတှငျးရှိ ပွညျသူမြားဖွငျ့လညျးကောငျး၊ အပိုငျးနှဈပိုငျးခှဲကာပွုလုပျခဲ့သညျ။
ဤသို့ သံလှငျ(Citizen Empowerment Program) အဖှဲ့နှငျ့အတူ ပွညျသူလူထုအမွငျသဘောထားစဈတမျးကောကျယူခွငျးနှငျ့ စကားဝိုငျးဆှေးနှေးပှဲမြားတှငျ တကျကွှစှာ ကူညီဆောငျရှကျပေးပါသော ဦးရဲအောငျ(OMI)၊ ဒသေခံ ဗျောလနျတီယာမြား အားလညျးကောငျး၊ စဈတမျးကောကျယူစဉျ စိတျရှညျစှာ ဖွကွေားပေးခွငျး၊ ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာ ပါဝငျဆှေးနှေးပေးပါသော ကြေးရှာ/ ရပျကှကျနပွေညျသူမြားအားလညျးကောငျး၊ အထူးကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး မှတျတမျးတငျအပျပါသညျ။
စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ(ဒေးဒရဲမြို့နယ်) ၂၅. ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ ၂၀၂၀။
သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့မှစီစဉ်သည့် ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြည်သူတို့၏သဘောထားအမြင် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဒေးဒရဲမြို့နယ် (၂၅ . ၂. ၂၀၂၀) ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင် ဥတိုကျေးရွာ၊ ကျုံဒူးဒါးမလိမ်းကျေးရွာနှင့် ဂွကလေးကျေးရွာတို့ရှိ ပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း၊
နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မြို့ပေါ် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်နှင့် အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်တို့အတွင်းရှိ ပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း၊ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲကာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤသို့ သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့နှင့်အတူ ပြည်သူလူထုအမြင်သဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် တက်ကြွစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသော ဦးရဲအောင်(OMI)၊ ဒေသခံ ဗော်လန်တီယာများ အားလည်းကောင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူစဉ် စိတ်ရှည်စွာ ဖြေကြားပေးခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးပါသော ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်နေပြည်သူများအားလည်းကောင်း၊ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
Previous Post: စကားဝိုငျးဆှေးနှေးပှဲ ( ဖြာပုံခရိုငျ၊ ဖြာပုံမွို့နယျ (၂၄ . ၂. ၂၀၂၀)
Next Post: ပွညျသူတှပွေောတဲ့ ရပျကြေးအုပျခြုပျရေး